တောင်တရုတ်ပင်လယ်ထဲမှာ စစ်ဖြစ်ခဲ့ရင် အမေရိကန်၏ လက် နက်အင်အားနှင့် စစ်ပွဲအတွင်း ပါဝင်လာကြမည့် မဟာမိတ်နိုင်ငံများ – Zartiman
အကယ်၍ တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာ စစ်ဖြစ်ခဲ့ရင် အီရန် ဘက်ကဝင်ကူရင်လည်းအစ္စရေးက စစ်ထဲကိုဝင်လာမှာပါ ။တကယ်စစ်ဖြစ်လာ ရင်လည်း …တရုတ်မှာတိုက်ချင်းပစ်ဒုံးကျည်တွေပဲပစ်ဖို့ရှိတာပါရှိရှိသမျှ ဒုံးကျည်အစင်းရေ သိန်းချီပြီး အမေရိကန် နဲ့ အမေရိကန်စစ် အခြေ စိုက်စခန်းတွေကိုစုပြုံပီးပစ်ဖို့ရှိတာပါ ။ အမေရိကန် က လက်ဦးမှု ရယူပြီး တရုတ်ဂြိုလ်တု တွေကို ဖျက်ဆီးလိုက်မယ် ဆိုရင် ဒုံးကျည်က လည်းပစ် လို့မရပါဘူး။
ကမ္ဘာ့တည်နေရာပြ လမ်းညွှန် စနစ် GPS မရှိဘူးဆိုရင် ဒုံးကျည်ကို မထိန်းချုပ်နိုင်ပဲ ကိုယ်ပစ်တဲ့ဒုံးကျည်က ကိုယ့် ရဲ့ခေါင်းပေါ် ကို ပြန်ပီး တော့ ကျလာနိုင်ပါတယ်။လေတပ် အင်အားအရလည်း ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ ကိုဖြ တ်ပီး အမေရိကန် ကို ဗုံးကျဲနိုင်တဲ့မ ဟာဗျူဟာမြောက် ဗုံးကျဲလေယာဉ်တွေမ ရှိသေး ပါဘူး ။အကယ်၍ အနည်း အကျဉ်း ရှိခဲ့မယ် ဆိုရင်တောင် တရုတ် ကို ပတ်ပတ်လည် ဝိုင်းရံထားတဲ့ အမေရိ ကန်စစ် အခြေစိုက်စခန်းတွေနဲ့လေကြောင်းရန်ကို ကာကွယ်ရေးနဲ့ဒုံးခွင်းဒုံး စနစ်တွေကို မကျော်ဖြတ်နိုင် ပါဘူး
ဒီတော့ တရုတ်ကြီး လည်း ဂျောင်ပိတ်မိနေတဲ့ခွေးတစ်ကောင် လို ဖြစ်နေ မှာ မြင်ယောင်မိသေး တယ်။နောက် တစ်ခုပြောချင်တာက မြန် မာပြည် အနေနဲ့လည်း အနေ အထိုင်ဆင်ခြင်ပီးနေတတ် ဖို့လည်းအရေးကြီး ပါတယ် ။ အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေ အားပြိုင်တဲ့ ကြားဖင်ထမ ယားမိဖို့ ပဲလို တာပါ ။တရုတ်က သူပိုင် ပါတယ် လို့…မတရားကြေငြာထား တဲ့ တောင်တရုတ် ပင်လယ်ပြင် မှာ။
အမေရိကန် လေယာဉ်တင် သင်္ဘောအုပ်စု က ၂ စုတောင်မှရောက် ရှိနေ ပါပြီ ။U.S တို့ ရဲ့ လေယာဉ်တင် သင်္ဘော အုပ်စု တစ်စု မှာ ၁. လေ ယာဉ်တင်သင်္ဘောကြီး။၂. ခရူဇားစစ်သင်္ဘော ၂စီး။ ၃. ဖျက်သင်္ဘော ၅ စီး။ ၄. ဖရီးဂိတ်အဆင့် စစ်သင်္ဘော ၅ စီး။ ၅. နူကလီးယားစွမ်းအင် သုံးရေငုတ်သင်္ဘော ၂ စီး။၆. ထောက်ပံ့ရေးသင်္ဘော ၁စီး စုစုပေါင်းအားဖြင့် ၁၆ စီးကနေ အစီး ၃၀ ကျော်ရောက် ရှိလို့နေ ပါပြီ။
တကယ်လို့ တရုတ် နဲ့ အမေရိကန်စစ်ဖြစ်ရင် တရုတ်နဲ့ မြောက်ကိုရီးယားက တစ်ဖက် အမေရိကန် ဂျပန် တောင်ကိုရီးယား ဖီလစ်ပိုင် ဗီ ယက်နမ် ဘရူးနိုင် မလေးရှား အင်ဒိုနီးရှား ထိုင်ဝမ် နဲ့ ဗြိတိန်တို့က တဖက် အင်အား က တဖက်သက်သာနေမှာဖြစ်ပါတယ် ။ရုရှားလို အာ ဏာရှင် က ဝင်ကူမလာဆိုရင်တော့ ရုရှားဝင်ကူတာ နဲ့ ဥပရောပ နေတိုးအဖွဲ့က ရုရှားကို ဝိုင်းပီးတော့ဆော်မှာပါ ။
ဒီတော့ ရုရှား က နှာစေးနေမှာဖြစ်ပီး အလွန်ဆုံးကူညီ တယ်ဆိုရင်တောင်မှအမေရိကန်က တရုတ်ဂြိုလ်တုတွေကိုဖျက်ဆီးလိုက်လို့ GPS နဲ့ ဂြိုလ်တုအဆက်အသွယ်မရှိတော့တဲ့တရုတ်ကို သူ ရဲ့ဂြိုလ်တုတွေကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးလောက် တာပဲရှိမှာပါ ။
အကယျ၍ တောငျတရုတျပငျလယျမှာ စဈဖွဈခဲ့ရငျ အီရနျ ဘကျကဝငျကူရငျလညျးအစ်စရေးက စဈထဲကိုဝငျလာမှာပါ ။တကယျစဈဖွဈလာ ရငျလညျး …တရုတျမှာတိုကျခငျြးပဈဒုံးကညျြတှပေဲပဈဖို့ရှိတာပါရှိရှိသမြှ ဒုံးကညျြအစငျးရေ သိနျးခြီပွီး အမရေိကနျ နဲ့ အမရေိကနျစဈ အခွေ စိုကျစခနျးတှကေိုစုပွုံပီးပဈဖို့ရှိတာပါ ။ အမရေိကနျ က လကျဦးမှု ရယူပွီး တရုတျဂွိုလျတု တှကေို ဖကျြဆီးလိုကျမယျ ဆိုရငျ ဒုံးကညျြက လညျးပဈ လို့မရပါဘူး။
ကမ်ဘာ့တညျနရောပွ လမျးညှနျ စနဈ GPS မရှိဘူးဆိုရငျ ဒုံးကညျြကို မထိနျးခြုပျနိုငျပဲ ကိုယျပဈတဲ့ဒုံးကညျြက ကိုယျ့ ရဲ့ခေါငျးပျေါ ကို ပွနျပီး တော့ ကလြာနိုငျပါတယျ။လတေပျ အငျအားအရလညျး ပစိဖိတျသမုဒ်ဒရာ ကိုဖွ တျပီး အမရေိကနျ ကို ဗုံးကြဲနိုငျတဲ့မ ဟာဗြူဟာမွောကျ ဗုံးကြဲလယောဉျတှမေ ရှိသေး ပါဘူး ။အကယျ၍ အနညျး အကဉျြး ရှိခဲ့မယျ ဆိုရငျတောငျ တရုတျ ကို ပတျပတျလညျ ဝိုငျးရံထားတဲ့ အမရေိ ကနျစဈ အခွစေိုကျစခနျးတှနေဲ့လကွေောငျးရနျကို ကာကှယျရေးနဲ့ဒုံးခှငျးဒုံး စနဈတှကေို မကြျောဖွတျနိုငျ ပါဘူး
ဒီတော့ တရုတျကွီး လညျး ဂြောငျပိတျမိနတေဲ့ခှေးတဈကောငျ လို ဖွဈနေ မှာ မွငျယောငျမိသေး တယျ။နောကျ တဈခုပွောခငျြတာက မွနျ မာပွညျ အနနေဲ့လညျး အနေ အထိုငျဆငျခွငျပီးနတေတျ ဖို့လညျးအရေးကွီး ပါတယျ ။ အငျအားကွီးနိုငျငံတှေ အားပွိုငျတဲ့ ကွားဖငျထမ ယားမိဖို့ ပဲလို တာပါ ။တရုတျက သူပိုငျ ပါတယျ လို့…မတရားကွငွောထား တဲ့ တောငျတရုတျ ပငျလယျပွငျ မှာ။
အမရေိကနျ လယောဉျတငျ သင်ျဘောအုပျစု က ၂ စုတောငျမှရောကျ ရှိနေ ပါပွီ ။U.S တို့ ရဲ့ လယောဉျတငျ သင်ျဘော အုပျစု တဈစု မှာ ၁. လေ ယာဉျတငျသင်ျဘောကွီး။၂. ခရူဇားစဈသင်ျဘော ၂စီး။ ၃. ဖကျြသင်ျဘော ၅ စီး။ ၄. ဖရီးဂိတျအဆငျ့ စဈသင်ျဘော ၅ စီး။ ၅. နူကလီးယားစှမျးအငျ သုံးရငေုတျသင်ျဘော ၂ စီး။၆. ထောကျပံ့ရေးသင်ျဘော ၁စီး စုစုပေါငျးအားဖွငျ့ ၁၆ စီးကနေ အစီး ၃၀ ကြျောရောကျ ရှိလို့နေ ပါပွီ။
တကယျလို့ တရုတျ နဲ့ အမရေိကနျစဈဖွဈရငျ တရုတျနဲ့ မွောကျကိုရီးယားက တဈဖကျ အမရေိကနျ ဂပြနျ တောငျကိုရီးယား ဖီလဈပိုငျ ဗီ ယကျနမျ ဘရူးနိုငျ မလေးရှား အငျဒိုနီးရှား ထိုငျဝမျ နဲ့ ဗွိတိနျတို့က တဖကျ အငျအား က တဖကျသကျသာနမှောဖွဈပါတယျ ။ရုရှားလို အာ ဏာရှငျ က ဝငျကူမလာဆိုရငျတော့ ရုရှားဝငျကူတာ နဲ့ ဥပရောပ နတေိုးအဖှဲ့က ရုရှားကို ဝိုငျးပီးတော့ဆျောမှာပါ ။
ဒီတော့ ရုရှား က နှာစေးနမှောဖွဈပီး အလှနျဆုံးကူညီ တယျဆိုရငျတောငျမှအမရေိကနျက တရုတျဂွိုလျတုတှကေိုဖကျြဆီးလိုကျလို့ GPS နဲ့ ဂွိုလျတုအဆကျအသှယျမရှိတော့တဲ့တရုတျကို သူ ရဲ့ဂွိုလျတုတှကေိုအသုံးပွုခှငျ့ပေးလောကျ တာပဲရှိမှာပါ ။
ဗဗ တို့ ရဲ့ ခဈြတူလေး မောငျထူး
ကိုးကား – ရိုကျတာ သံပါးစပျ (30.7.2020)